(*) Chinese New Year Messages 2017 [New] (*) Chinese New Year Messages 2017 [New]
(*) Chinese New Year Messages 2017 [New]
Chinese itsva gore mashoko vari amuri panzira uye isu takafunga kuti kukwira Chinese gore idzva 2017 mashokoS rinoenderana nokuti imi. Tiri kutarisira kuti mipiro yenyu 2017 Chinese itsva gore mashoko.
Happy Chinese gore idzva anoda mashoko
Ratidza kuonga kuti unogona kuona Year New muupenyu hwako zvakare. Dzidza kubva rako kare zvikanganiso uye kutora nyika dzakakwirira midzimu!
Chinese itsva gore mashoko
Asati kunobuda zuva zuva wokutanga 2017, regai ini penda vose mwaranzi nezvikomborero kubudirira uye mufaro iwe. Pano chiri achida iwe zvinoshamisa New Year!
Chinese itsva gore tutsamba shamwari
Uyu New Year ndinoda kuti:
Fate haambovi kwauri nematambudziko tasva;
Cupid anorova nemi museve wake dzatinonyanya;
Lady Luck hunopa penyu utano uye upfumi;
Your Guardian Angel anochengeta pfungwa dzako vakamuka uye yakajeka.
Uve Happy uye Blessed Year New
Oh zvangu Dear, Forget Kutya Ur,
Regai muUri Dreams zvose kuva Clear,
Never akaisa kubvarura, Inzwaiwo,
Ndinoda kutaurira munhu chinhu muUri Ear
Achida nepfambi zvikuru "Happy NEW GORE"!
2017 Chinese itsva gore mashoko
zvido zvangu nokuti iwe, kutanga zvikuru Jan, Tide Feb, Peace March, No kunetseka nokuti April, Fun May, Mufaro June kuna Nov, Mufaro Dec, Ivai raki uye anoshamisa 2017.
Dai mazuva ako ave glittery sezvo Diamonds;
Dai shamwari dzako vave vakanaka sezvo Gold;
Dai mwoyo wako agare manyoro sezvo Emerald;
Uye kuti mweya yenyu kuramba akachena sezuva rinopenya Pearl.
Dai New Year rokuchinja yenyu:
misodzi yako kupinda mufaro
Zvirongwa Your chiito
zviroto Your zviitike
nemari Your kupinda midziyo
Rudo rwenyu kupinda yokumboonana
Uye zviitiko vako dzokugara!
Happy chaizvo Year New A
Gong Xai Fa mashoko 2017
Amai & Baba .... Ndinokutendai nokuti uchindiita Muupenyu Hwako uye Dzose tikaregeredza Pazvikanganiso My & Achiri Me Kutsigira muna Zvose zvandinoita. Love Nguva Dzose. Happy New Year My Lovely Vabereki.
2017 Gong Xi Fa Modhekai mashoko
Rumbidzo kuna Mwari kumusoro-soro,
Ndiani munhu Mwanakomana wake wakakupai;
Nepo ngirozi nziyo norudo nokufara,
A wakafara gore itsva yose!
tutsamba Chinese gore idzva
Year New anounza chete Mufaro kwete Putsira,
Munhu wose anoda You Dear chete,
Matambudziko ako ose achava Finish ......
Zviri nokuti zvamunoda Special wangu NEW GORE'S.
Whatsapp shoko Chinese gore idzva
May dzose masekonzi, maminitsi, maawa, mazuva, Vhiki uye mwedzi iyi New Year achakudzoserai zvikuru mufaro uye rombo! Goredzva rakanaka!
Sezvatinokurukura danda kubva yapfuura gore uye kupinda gore rino danda, Ndiri kukutumai pamwoyo anoda azere nerudo, rombo, mufaro uye mufaro. Goredzva rakanaka!
Chinese itsva gore 2017 mashoko
Ngatiite hwedu New Year chisarudzo kuti ikoko nemumwe uye kubatsira vamwe vanhu vanoshaya kunyange kana tisingazivi pachedu. Naizvozvo uyai ngationei kuparadzira vamwe mutsa uye kurudzira!
Funny Chinese itsva gore mashoko
Chimwe muchiso itsva gore ari pano saka recharge simba rako rose uye kuti akaisa kunakidzwa. Vasiye kufunganya zvose, kusava nechokwadi uye kutya uye kungotevera mutemo seka, rudo, kurarama.
Chinese itsva gore shoko mukoma
Dai gore huchavara kupfuura rakapfuura; Makafukidzwa zvakanaka uye KWAHWO; mufaro uye yokuwana.
Chinese itsva gore mashoko mhuri
Happy New Year Greetings Neshamwari dzangu All!
Ivai norugare nevavakidzani vako uye hama dzose,
Panguva hondo zvakaipa zvenyu uye kusakwana,
Uye umwe Year New akakuwanai nani munhu!
Achida iwe hunofadza chaizvo New Year!
Buda: Chinese Year New 2017 zvido
Chinese gore idzva 2017 mashoko akanaka
Achida imi zvose zvakanaka izvi New Year!
Nakidzwa, rufaro, runyararo, rudo, kutarisira, rombo uye kubudirira mberi!
kusetsa Chinese gore idzva 2017 mashoko
Dai iwe gore guru yakazara zvikuru mufaro uye rombo! Rambira utano hwakanaka uye vabudirire zvikuru dzakakwirira kubudirira. Achida iwe gore chinoshamisa mberi!
Chinese itsva gore mashoko mufananidzo
Apo ndinofunga kwedu ushamwari uye kufara kwayo akandiita, Ndinoda dai imi mufaro mugore inouya.
The Chinese New gore mashoko 2017 wava zvakare nokukurumidza uye tingada kuda kuona zviri yavo muuropi yako Chinese itsva gore rino. Unoziva tizivise chii chauri kutarisira ichi Chinese itsva gore 2017 mashoko. Gong Xi Fa cai mashoko 2017 vakanga vachangobva curated kwamuri.